महिलालाई पहिलो अवरोध परिवारबाटै ! | NepalDut
फागुन २५ गते २०७६
महिलालाई पहिलो अवरोध परिवारबाटै !
अनिशा श्रेष्ठ पोखरा
अहिले पनि सम्झिन्छु म त्यो दिन । मैेले संयोजन गरेको कार्यक्रममा सम्मान गर्न लागिएकी दिदीसँग गहन प्रश्न गरेकी थिएँ । मैले त्यही दिन नै त्यो प्रश्नको उत्तर पाएकी थिएँ । तर मैले उहाँको उत्तरमा आनन्द लिइरहेकी त थिए तर सन्तुष्ट भने थिइनँ । १० वर्ष बितिसक्दा पनि ताजै लाग्छ मलाई उहाँको त्यो उत्तर । त्यो विश्लेषण, अनुहारमा एउटा, मुखमा एउटा उत्तर । कति रात सोचें, कति दिन सम्झें, जे होस् आज पनि त्यो दिन म सम्झिइनै रहन्छु ।
किनकी कुरा त्यहाँ महिलाको अस्तित्व र स्वतन्त्रताको थियो । कति उत्तर झूटा थिए या सत्य थिए, म आज बल्ल नियाल्दै छु । एउटा नेतृत्वमा पुगेका महिला र समाजमा आफ्नो पहिचान बनाउन पुगेका महिलालाई अहिले पनि बाधा खोज्न बहिर जानु पर्दैन । प्रायः घरमा सिर्जना गरिन्छ । हामी २१ औं शताब्दीका परिवर्तित महिलाको उदाहरण दिएर कुरा गर्छौ तर पनि हामीलाई थाहा हुँदैन ती महिलाले स्टेजमा भाषण गर्न र १ रात घर छोडेर हिड्नका लागी कति पापड बेल्नुपरेको हुन्छ । उनीहरुले शब्दमार्फत विश्वास दिलाउनका लागि निकै प्रयत्न गर्नुपरेको हुन्छ । त्यही परिवेश वा विषयमा पुरुषले भने महिलाको अनुमति लिनै पर्दैन । जानकारी दिए पुग्न, कहिलेकाँही त जानकारी पनि दिइदैन ।
सानैबाट विद्यालय जाँदा ढिलो होस् कि कतै खेल्न जाँदा छोरालाई यसको स्पष्टिकरण शायदै दिनुपर्छ तर छोरीले कारण बताउनै पर्छ । नभए यातना सहनुको विकल्प हुँदैन । बच्चैबाट म छोरी भएकाले म कमजोर छु र छोराहरु अर्थात् पुरुषहरुले बढी अधिकार पाउनु ठीकै हो भन्ने मानसिकता हाम्रो समाजले सिकाइरहेको छ । अधिकांश परिवारमा पुरुषको स्थान पहिलो र महिलाको दोस्रो देखिन्छ । अर्थात आइमाइ दोस्रो दर्जामै छन् ।
समय बदलियो, युग फेरियो, राज्य व्यवस्था नयाँ आयो । महिलालाई पुरुषसरह हक, अधिकारको व्यवस्था भयो । ऐन, कानुनमा समानता भए पनि समाज उस्तै छ, समाजका हर्ताकर्ताको दिमाग उस्तै छ । महिलाले केही नयाँ र फरक खालको काम गर्न खोजे उसलाई प्रोत्साहनको सट्टा लाञ्छना लगाइन्छ । यो क्रम परिवारबाटै सुरु हुन्छ । अग्निपरीक्षा दिने सीताको कथा गौरवगाथाका रुपमा सुन्ने हाम्रो समाज यो युगमा पनि सीताहरुको अग्निपरीक्षा लिन चाख मान्छ ।
महिलालाई अवरोध खोज्न कतै जानुपर्दैन, घरबाटै सुरु हुन्छ । समाजसम्म पुग्दा त यस्ता अवरोध लहरै भेटिन्छन् ।
सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, धार्मिक जुनसुकै काम गर्न पनि घरबाहिर निस्कनै पर्छ । घरको चौघेरोबाट निस्किएपछि महिलामाथि औंला उठाउन सुरु गरिन्छ । आइमाईले यो काम गर्न सक्दिन, हिक्मत छैन, क्षमता छैन जस्ता टिप्पणीबाट उसलाई हतोत्साही बनाइन्छ । त्यतिले उपछि हटिन भने चरित्रमाथि औंला उठाइन्छ । ती काममा सहकार्य गर्नेहरुसँग नाम जोडिन्छ । कतै कतै त अनैतिक सम्बन्ध भएकैले अवसर पाएको, काम पाएको भन्नेहरु पनि भेटिन्छन् । महिलालाई अवरोध खोज्न कतै जानुपर्दैन, घरबाटै सुरु हुन्छ । समाजसम्म पुग्दा त यस्ता अवरोध लहरै भेटिन्छन् ।
यस्ता अवरोधहरु छिचोल्दै, कठिनाइ झल्दै अघि बढ्ने महिला थोरै छन् । उनीहरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने ऐतिहासिक दिन हो विश्व नारी दिवस । समाजका बन्धन र परिवारको अप्ठेरालाई झेल्दै जिम्मेवार, कर्तव्यनिष्ठ र इमान्दार भएर जीवनपथमा अघि बढिरहेका नारीहरुको महान् पर्व हो यो । लिंगकै आधारमा विद्यमान विभेदहरुलाई अन्त्य गर्दै सभ्य समाज र जिम्मेवार नागरिक बन्न यो दिनले प्रेरणा देओस् । अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको शुभकामना !
राहतको विवरण संकलनमै झडप
वीरगञ्जमा लकडाउनमा विपन्न परिवारलाई राहत वितरणका लागि लगत संकलन गर्ने क्रममा झडप…
एकैपटक १० रुपैयाँ घट्यो भाउ
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको छ। निगमले पछिल्लो पटक…
ओबिसिआईसँगको सम्झौता रद्द, भोलिबाट नयाँ प्रक्रिया थालिने
ओबिसिआईसँग गरेको औषधि तथा मेडिकल उपरकण खरिदको सम्झौता रद्द गरेको स्वास्थ्य तथा…
प्रेसर कुकर पड्कदा घाइते
बुधबार बिहान म्याग्दीको मंगलबार ४ पाखुरेमा प्रेसर कुकर पड्किँदा वृद्धा घाइते भएकी…
सांसदले दिए मजदुरलाई राहत
विश्वमै फैलिदै गएको नोवल कोरोनो भाईरस ( कोभिड–१९¬) रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न…
सबै प्रदेशलाई गरिमाको ५/५ लाख
विश्वभर कोरोना फैलिएको भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागी गरिमा विकास बैकले ३५ लाख…